Ra'iisul-wasaarihii hore ee Soomaaliya oo ku soo biiray tartanka madaxweynenimada - Sabahionline.com
Ra'iisul-wasaarihii hore ee Soomaaliya oo ku soo biiray tartanka madaxweynenimada
Luulyo 10, 2012
Ra'iisul-wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmajo ayaa ku dhawaaqay in uu ka tagayo shaqadiisa uu ka hayay Maraykanka oo uu isu sharrixi doono tartanka madaxweynenimoee dhici doona bisha dambe, sidaana waxa Isniintii (9-kii Juulaay) sheegay Daily Nation-ka Kenya.
Hoggaamiyayaasha Kenya oo dhiirri-galiyay doorasho ku dhacda nabdoonana iyo caddaalad
Uhuru Kenyatta oo loo dhaariyay madaxweynaha 4-aad ee Kenya
Barlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay wasiira-dowlayaal iyo wasiir ku xigeenno
Farmaajo ayaa sheegay in uu go'aansaday "in uu markale isku dayo siyaasadda Soomaaliya sababtoo ah waxaan rumaysanahay in laga shaqeeyo danta guud ee dalka hooyo".
"Waxaan go'aansaday in aan tartamo, dhameeyo shaqadaydii qabyada ii ahayd, ee aan qorsheeystay makrii la ii magacaabay ra'iisul-wasaaraha," ayuu yiri Farmaajo. "Waxaan rabaa in aan shaqada ka sii wado halkii aan uga tagay."
Xilligiisii laga soo bilaabo 2010-kii illaa 2011-kii, Farmaajo ayaa waxaa lagu xasuustaa sidii uu uga hortagay musuqmaasuqa ka jira Soomaaliya iyada oo uu ahamiyadda koowaad siiyay in uu ku bixiyo mushaarka ciidamada xilliga loogu talagalay, ayuu waruyay wargayska. Waxa uu is casilay June 2011-kii sida uu farayay heshiiskii Kampala.